“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6” Nokia လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်မိသလဲ? - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6”
Nokia လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်မိသလဲ?
ဘက်ထရီ သက်တမ်း တာရှည်ခံတယ်….
Ring Tone ကို ကြိုက်တယ်….
Father is Back … ဟုတ်ပါတယ်.. .. မိုဘိုင်းဖုန်းလောကမှာ ဘိုးအေကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nokia ဟာ ပြန်လာပါပြီ။ အရင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းတွေ .. OS … တွေနဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Nokia ဟာ အခုတော့ အပြောင်းအလဲ သစ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာတို့ အကြိုက် ထွက်ရှိလာပါပြီ…..။
ရွှေမြန်မာတို့အတွက် မြန်မာဖောင့်ဟာ အလွန်ပဲအရေးပါပါတယ်။ ဒီအတွက် Nokia6မှာ Build in ပါဝင်လာပါတယ်။ Unicode အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အသုံးပြုလာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Root ဖောက်စရာ မလိုတဲ့အတွက် ဒီအချက်ကလည်း Nokia ကို ဝယ်ချင်စိတ် ပေါက်စေပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း ကျစ်လစ်ပြီး မာကြောတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ လက်ထဲ ကိုင်ရတာလည်း အတော်လေး အဆင်ပြေပြေရှိလှတယ်။ မြင်တာနဲ့တင် ကြွေလောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံပါ။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားကလည်း ၅.၅ လက်မဆိုတော့ လက်ထဲမှာ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိစေမှာပါ။Display ကိုလည်း Corning Gorilla Glass3နဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ် ပေးထားပြန်ပါတယ်ဗျ။
မှတ်ဉာဏ်ပါဝင်မှုကလည်း ROM 32GB , RAM3GB ဆိုတော့ အချက်အလက်တွေ သိုလှောင် နိုင်ရုံသာမက ပေ့ါပေ့ါပါးပါးလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ Android Version 7.1.1 (Nougat) ဆိုတော့ ပိုတောင် သုံးလို့ ကောင်းသွားမှာပါ။ Chipset အနေနဲ့ Qualcomm MSM 8937 Snapdragon 430 ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 နဲ့ တွဲဖက်မောင်းနှင်ပေးထားပါတယ်။ GPU ကတော့ Adreno 505 ပါ။
ကင်မရာကလည်း 16MP ကင်မရာကို ကျောဘက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Panorama, HDR အစရှိတဲ့ Feature တွေနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ Selfie ကင်မရာကတော့ 8MP ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အကြိုက် Fingerprint ကလည်း ပါပြီးသားပါ။ GSM နှစ်ကဒ်ထိုးလေး ဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ် အဆက်သွယ် များတဲ့သူတွေအတွက် အိုကေပါပဲ။ ဘက်ထရီကလည်း 3000 mAh ဆိုတော့ကာ အချိန်ကြာကြာလည်း အသုံးပြုနိုင်အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
More in this category: « Samsung Galaxy J5 Prime “လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi 5X” »